Samsung SMS Iweghachite: Olee naghachi ozi ederede site na Samsung Devices
Olee otú Naghachi ozi ederede site na Samsung Devices
> Resource> Android> Olee naghachi ozi ederede site na Samsung Devices
Chọrọ ịmata obere ihe nzuzo gị di / nwunye? Chọrọ ichebe ụmụ gị n'ebe ọjọọ ọmụma? Ma ọ bụ nanị chọrọ iji weghachite gị onwe gị na-ehichapụ ozi na gị Samsung ngwaọrụ? N'agbanyeghị mere ị chọrọ iji naghachi ehichapụ ozi ederede site na Samsung ngwaọrụ, e nwere ụzọ. Na a Samsung ozi mgbake ngwá ọrụ, ị nwere ike ịnweta na-agbake ehichapụ ozi ederede site na Samsung enweghị hassle.
Olee otú naghachi SMS ozi site na Samsung
Nke mbụ niile, na-a Samsung SMS mgbake omume: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery). Ọ bụ nke mbụ ozi mgbake software maka Samsung ngwaọrụ na ụwa. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ oké nhọrọ maka gị. Na ya, ị nwere ike mfe naghachi ehichapụ data si Samsung ngwaọrụ, gụnyere ozi, kọntaktị, foto na video. Dum usoro nke mgbake na-ewe gị a nkeji ole na ole.
Download free ikpe mbipute a Samsung ozi mgbake software n'okpuru:
Cheta na: biko ego gị Samsung ngwaọrụ nlereanya na Android OS ebe a tupu ị na-eme mgbake. Ọ bụghị ihe niile Samsung ngwaọrụ na-akwado ugbu a, site Wondershare Dr.Fone for Android.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Samsung ngwaọrụ na kọmputa
Na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone for Android mgbe ị download na wụnye ya na gị PC, na ị ga-ahụ bụ isi window n'okpuru. Mgbe ahụ jikọọ gị Samsung ngwaọrụ na kọmputa na-aga nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Kwado USB debugging na gị Samsung ngwaọrụ
Tupu Doppler, i kwesịrị inwe ike USB debugging na gị Samsung. Ọ bụrụ na ị na-emeghị ya n'ihu, ị ga-enweta a window n'okpuru, na mkpa ka i soro nkọwa ime ya ugbu a. Ọ bụrụ na ị mere, ị ga-ikwu ya na-akpaghị aka.
1) N'ihi Android 2.3 ma ọ bụ tupu: Tinye "Mwube" <Pịa "Ngwa" <Pịa "Development" <ego "USB debugging"
2) N'ihi na Android 3.0 4.1: Tinye "Mwube" <Pịa "Mmepụta nhọrọ" <ego "USB debugging
"3) N'ihi Android 4.2 ma ọ bụ ọhụrụ: Tinye" Mwube "<Pịa" Ihe ekwentị "<Kpatụ" Mee ọnụ ọgụgụ "ruo ọtụtụ ugboro ruo mgbe na-a dee" Ị bụ n'okpuru Mmepụta mode "<Back to" Mwube "<Pịa" Mmepụta nhọrọ "<ego" USB debugging "
Nzọụkwụ 3. Tụlee na ike iṅomi gị Samsung ngwaọrụ maka ehichapụ ozi
Mgbe ị na-ebe a, pịa "Malite" bọtịnụ na window n'okpuru ka usoro ihe omume nyochaa ngwaọrụ gị tupu gị scanning. Tupu eme ya, jide n'aka na ngwaọrụ gị batrị bụ karịa 20% ebubo.
Ọzọ, ị mkpa ịgakwuru gị Samsung ngwaọrụ n'ụlọ ihuenyo mgbe analysis bụ n'elu. Pịa "Ka" iji mee ka ndị Superuser arịrịọ. Mgbe ahụ azụ gị na kọmputa, na pịa "Malite" na usoro si window na-amalite iṅomi.
Nzọụkwụ 4. Preview na-agbake ehichapụ ozi ederede na Samsung ngwaọrụ
Ị mkpa na-eji oge ụfọdụ na iṅomi. Mgbe ya, ị ga-ahụ recoverable ozi na udi nke "Izi ozi". Lelee akowaputara ọdịnaya otu otu na akara ihe ị chọrọ. Mgbe ahụ mbupụ ha ka ha na kọmputa gị site na ịpị "Naghachi". Ị nwere ike gụọ ozi na usoro nke HTML na kọmputa gị ugbu a.
Cheta na: N'ezie, ozi dị na Doppler N'ihi-agụnye ndị ehichapụ na nso nso (oroma font) na nke ndị ẹdude ndị (nwa font). Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị azụ na-ehichapụ n'anya, Ị nwere ike ikewapụ ha site na iji taabụ n'elu: Naanị egosipụta ehichapụ ihe.
Download free ikpe mbipute a Samsung ozi ederede mgbake software n'okpuru:
Android 5.0 Lollipop Data Recovery - Naghachi Text Ozi, Ndi ana-akpo na Photos
Android-agba ọsọ ngwa? Ego 7 Atụmatụ na iji ọsọ Up Android Mfe
Olee otú Ekekọrịta Android ihuenyo
10 Best Igwefoto ngwa ọdịnala n'ihi Android
Otú nyefee Data si Motorola ka Samsung
Mfe Export / Import CSV Ndi ana-akpo si na Android ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Download Samsung Android Software
Top 5 Android Task Manager: Gbuo aga-eme na ọsọ Up Android
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na HTC dike
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos & Videos si HTC EVO 3D ekwentị mkpanaaka na